XASIL OO ILA GARO. (XIKMADO KOOBAN) Qalinkii Mohamed Musa Sh. Noor | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Published: September 9, 2017, 10:15 pm
Hadaba marka aad dadaal suubinayso waxaa qasab ah maadaama aad Bani aadam tahay in aad qaladaad badan samayso, balse taas dhib ma lahan, muhiimadda waxay ahayd in aad dadaasho, isma aadan lahayn Qalad suubi, waxaa lagaa doonayaa markaas in aad dib u saxdo qaladakaaga.
Hadaba dadaalkeena ku aaddan dhanka Nabadda waa in uu bataa, oo aan iska deynaa dadaal xumada natiijadeeda noqotay dhibka aan maanta dhex taaganahay, dadaalka sidiisaba dhinaca looga faaiidaysto ayuu noqdaa.
2 WAXAA TAHAY QAALI
Waxaa tahay qaali, sida aad ku noqtayna aniga ayaa kuu sheegaya, waxayna tahay, waxaa tahay farsamada uu Alle sameeyay, waxaana ka mid tahay milkiyadda uu Alle leeyahay, wax walba oo alle leeyahayna waa qaali, sidaa darted, dadku waa kuwa iska moogaysiiya ama iska indha tira waxa aysan awoodin hanashadooda mararka qaarna iska diida ayaga oo iska dhigaya in aysan u baahnayn hubaashuna waa in ay u baahan yihiin balse aysan awooddooda aysan u gaareyn.
Muhiimadda qoraalka ayaa ah in qof haddii uu ku diido ama uu iska kaa indha tiro aysan la micna ahayn in aad tahay qof qofkaas ka liita ama aadan u qalmin, fakarka nuucaas ahna waa in aadan ku fakarin ee aad u fahamtaa in qofkaas aad ka qaalisantahay balse uusan isagu kuu qalmin, micnaha uusan ka bixi Karin dalabaadkaaga xagiisa ku aaddan, sidaas darteed ayuu u muujinayaa isla waynida iyo Xaqiraadda isaga oo Madaxa Carada ka cesho is leh.
Xalkiisa waa laba mid in uu noqdaa, mid ficil ahaan loo sameeyo oo ah in waxaas lagu gafay lagu saxo ficil kale si gafka uu meesha ugu dhamaado.
Midka kalena waa in Raali galin laga baxshaa, waa marka uu gafku ku dhaco si hadal ahaan ah, raali galintu waa u muhiim qalbiyadeena, marka aad khaldantahay oo aad raali galin bixiso qalbigaada xitaa waxbaa ka dagaya sida culays u eg, sidaas si la mid ah qofka aad ku gaftay oo isagana iska kaa cafiyo maadaama aad usoo noqotay, inkastoo dadku aysan isku mid ahayn, oo qaarkood marka la maslaxeeyo ay kasii daraan, ugu dambayn raali galinta ku dadaal marka ay tahay in aad wax raali galiso.
4 ISKA FARAXSANOW
Nolosha waa mid waqtiyeesan, sidaa ay tahayna waxaa wanaagsan in Waqti walba sida uu yahay looga faa’iidaysto oo waqti walba si xikmadaysan aad u qaadato adiga oo cabiray ama miisamayaa waxa kuu soo kordhay ama kaa nusqaamay, waxa kaa qaldamay ama aad saxday, dhamaan waa in mar walba aad tahay qof dhinac walba ka miisaaman oo ka xisaabsan.
Dadku ma jecla kuwa xisaabiya, dadkuna waa kuwa kuugu yimaada sida waqtiga uu kuu soo wajaho, qaar ayaad kala kulantaa Wanaag iyo Khibrad, qaarna Shallaayto iyo Murugo, sidaas si la mid ah waqtiga.
Wax walba oo nolosha ka mid ah waa laba laba, Muugo iyo Farxad, farxadda waa mid nafciya badan leh, naftaada ayay mar qancisaa oo sawiro qurxoon ayay gudahaaga u gudbisaa, sidaas si la mid ah cadowgaaga ayey murjisaa marka ay kula kulmaana adiga oo faraxsan, Farxadda waa laba Nuuc, midna waa Qiyaali, mindna waa Dhab, labadaba laguma qasaaro, sidaa darteed, waxaa wanaagsan in mar walba aad farxad muujiso.
Murugada waa mid gudahaaga gubta, maskaxadaada disha, kuu sawirto shallaayto iyo dhamaadka noloshaaada, sidaas si la mid ah waxay farxad galisaa cadowgaaga, waxay soo saartaa daciifnaantaada, waxay kaa dhigtaa mid dullaysan, oo wajigaaga iyo qaab dhismeedkaaga ayay dishaa, ma ahan wax lagu faano ama la kasbado Murugada, sidaa darteed waa in looga fogaadaa murugada, farxad dhabeed iyo mid qiyaali ahba.
Maalin walba Qoraalo ayaan idinla wadaagaa, waa laga yaabaa qaarkiin ay dhibsadeen qoraaladayda, qaarkiina ay ku farxaan, qaarkiina aysan ka helin oo ay is dhahaan waa maxay ninkan howl la’aanta ah, balse dhabta sidaas ma ahan.
Inta wanaaga ku fakarta waxaan rajaynayaa in ay mar walba u xiisanaan doonaan aqriska qoraaladayda, inta xumaanta jecelse waxaan ku leeyahay ama i dhibsatay sidan “laga yaabee in aan xagiina ka ahay sida Shumac yar oo laga dugsado mugdiga, kaas oo waqti kooban ku ifa goobta lagu shitay, ugu dambayntana iska dhiima, balse rajadayda ayaa ah in wanaaga iyo qoraalada aan maalin walba idinla wadaagayo ay qaarkiin saamayn gaar ah ku yeeshaan qalbiyadiina si gaar ahna ay idiin taabtaan.
Qoraal aan aniga leeyahay mar walba uu qalbigaada taabto waxay la mid tahay aniga Maxamed Muusa ah oo qalbigaaga taabtay, Wanaag ma ahee Xumaan iyo lugooyo wax idinkuguma soo qoro, waxaan rajaynayaa intiina cafiska badan in aad iska key cafin doontaan haddaan si aadan jeclaysan qoraaladayda idiin taabsiiyay, muhiimadda ayaa ah in aan idinla wadaago wax walba oo wanaag ah oo ku dhisan Xikmad iyo is tusaalayn kale oo dhan walba taaban karaysa, aad ayaan idinkaga raali galinayaa wixii aydaan jeclaysan oo aan idinla wadaagay, wanaag wax ma dhibee xumaanta ayaa daran.
6 HA IS CADDIBIN
Dunida kuma aadan imaan talo adiga aad leedahay, sidaas si la mid ah waxa aad quudanayso iyo waxa aad noqon doonto iyo waxa aad samaynaysaba wax tala ah kuma lihid, xitaa xilliga aad ka tagayso dunida, marka haddiiba sidaas ay tahay noloshaada, oo qaabka aad u maaraynayso aadan wax tala ah ku lahayn, waa maxay sababta aad u wal washo?
Laga yaabee qaarkiin in aad igula doodaan in aysan sidaa arrinta ahayn, waana soo dhawaynayaa fikirkiina, balse, dhabta ayaa waxay tahay in wax aan xaga Rabi laga soo ogolaan uusan qofku samayn karin, qof walbana Qorshe Rabbaani ah ayuu ku yimid dunidan, waxaana jira Dariiq loo jeexay qaabka uu noloshiisa u hagayo, xitaa haddii uu qofku ku doodo in waxa uu gaaray ama noqday uu ku gaaray Dadaal xagiisa ah.
7 Baad iyo Biyo
Nolosha addunyada waa mid ka kooban Nabad galyo iyo wax la quuto, farxadda qofkana labadaas ayaa saldhig u ah, midkood hadduu maqan yahayna dhadhan ma lahan Nolosha, teeda kale Qof walba oo sharaf sheeganayana waa in uu ka dhisan yahay ama haystaa labadaas aan soo sheegay, haddii uusan haysan labadaas qofka mar walba waxbaa ka dhiman!!!!.